FlipaClip: Cartoon animation 2.4.1 Android အတြက္ Aptoide APK အား ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ
ဗားရွင္း 2.4.1 လြန္ခဲ့ေသာ2ရက္က
Application မ်ား အနုပညာ & ဒီဇိုင္း FlipaClip: Cartoon animation
FlipaClip: Cartoon animation ၏ ေဖာ္ျပခ်က္
ကာတွန်းသော်လည်းဘဝရန်သင့်အိပ်မက်တွေကိုယူခဲ့! FlipaClip ရဲ့အစွမ်းထက်နှင့်ပျော်စရာ tools တွေကိုဘောင်-by-frame ကိုကာတွန်းလွယ်ကူသောပါစေ။ နေ့စဉ်နေ့တိုင်းထူးခြားတဲ့နှင့်စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ် animations တွေကိုကိုအသုံးပြုသူများကကျွန်တော်တို့ရဲ့ကြီးထွားလာအသိုင်းအဝိုင်း Join!
သငျသညျ, ကွက်ကိုပုံကြမ်း animating, ဒါမှမဟုတ်ရိုးရိုးသင်ယူနေကြသည်ပဲဖြစ်ဖြစ်,
FlipaClip ရဲ့တုံ့ပြန်မှုကို interface ကိုအကောင်းဆုံးပုံဆွဲခြင်းနှင့် Animation အတွေ့အကြုံကိုပေးစွမ်းသည်။ ၎င်း၏ရိုးရှင်းသောအလိုလိုသိထိန်းချုပ်မှုသင့်ရဲ့ဖန်တီးမှုစိတ်ကူးစိတ်သန်းအတွက်လုံလောက်သောစတင်ခဲ့ပေမယ့်အစွမ်းထက်ရလွယ်ကူပါတယ်။
Drawing Tools များ
• brush, Lasso မှာ, ဖြည့်စွက်, Eraser ကိုနဲ့တူလက်တွေ့ကျတဲ့ကိရိယာများ, အနန္တတန်ခိုးရှင်ပုံစံမျိုးစုံနှင့်အတူဆွဲပါ, လူအပေါင်းတို့အခမဲ့မျိုးစုံဖောင် options များနှင့်အတူစာသားထည့်သွင်း!
• 1920x1920 အထိစိတ်တိုင်းကျပတ္တူအရွယ်အစားရရှိနိုင်ပါသည်။
•ဖိအားအထိခိုက်မခံတံကို Samsung S Pen ပါအပါအဝင်ထောက်ခံသည်။
•အခမဲ့3အလွှာအထိသုံးပါ!
•လိုလားသူ Go နှင့် 10 အလွှာအထိထည့်ပါ။ ဟုတ်ပါတယ်, ငါတို့သည်သင်တို့စကားကိုနားထောငျနှငျ့ပိုအလွှာကဆက်ပြောသည်ပေမယ့် app တစ်ခုထက်ပိုမို6အလွှာထည့်သွင်းပြီးနောက်စွမ်းဆောင်မှုဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များတွေ့ကြုံခံစားစေခြင်းငှါသတိပြုပါကျေးဇူးပြုပြီးပါတယ်။
Animation Tools များ
• Animation ဘောင်-by-frame ကိုထိုးထွင်းသိမြင်ကာတွန်းအချိန်ဇယားနှင့်ထိုကဲ့သို့သောကြက်သွန်နီအရေပြား, ဘောင်များကြည့်ရှုသူ, Grid အဖြစ်လက်တွေ့ကျတဲ့ tools တွေကိုမှစူပါလွယ်ကူပါတယ်ကျေးဇူးတင်စကားဖြစ်ပါတယ်။
•အလွယ်တကူအသံဖမ်းအပါအဝင်အခမဲ့ခြောက်လအသံပုဒ်အထိ အသုံးပြု. Audio Clip add နှင့်တည်းဖြတ်!
•ကြှနျုပျတို့လူကြိုက်များပြတိုက်မှူးအသံက FX အသံ packages များနှင့်အတူဖန်တီးမှုရယူပါ။
IMAGES / Video INSERT
•သင်တင်သွင်းသို့မဟုတ်အရသာ rotoscoping ကြောင့်ပေးကမ်းသင့်ရဲ့ဗီဒီယိုများထိပ်ပေါ်မှာဆွဲပုံရိပ်တွေလှုပ်ရှားပုံများ။
MOVIE နှင့် SHARE ရုပ်ရှင်ကို
•သင့်ဗိုလ်လုပွဲကာတွန်းဘို့, MP4 သို့မဟုတ် GIF ကိုရွေးချယ်ပါ။
•င့်လင်းမြင်သာအတူ PNG ပာထောက်ခံသည်။
•ဘယ်နေရာမှာမဆိုကဲ့သို့သင်တို့အကာတွန်း Share: TikTok, Youtube, Instagram ကို Facebook က, ဒါမှမဟုတ် Tumblr သည်။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ယူကျု့ချန်နယ် Subscribe to:
မည်သည့် app ကိုကိစ္စများရှိသည်သို့မဟုတ်အတွေးအခေါ်များမျှဝေဖို့လိုသလား?
FlipaClip: Cartoon animation အတြက္ အသံုးျပဳသူ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
FlipaClip: Cartoon animation အေပၚ ျပန္လည္စစ္ေဆးမႈမ်ား
FlipaClip: Cartoon animation အေပၚတြင္ ျပန္လည္ စစ္ေဆးမႈ မရွိပါ။ ပထမဆံုး ျပဳလုပ္လိုက္ပါ!
FlipaClip: Cartoon animation အား အခ်က္ျပပါ
yututuyy စတိုး0662
FlipaClip: Cartoon animation ႏွင့္ အလားတူေသာ အက္ပ္မ်ားကို ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ
APK အေၾကာင္း FlipaClip: Cartoon animation အခ်က္အလက္
ထုတ်လုပ်သူ Visual Blasters LLC
ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု မူဝါဒ http://www.visualblasters.com/flipaclip-privacy-policy.html
App Name: FlipaClip: Cartoon animation
လက်မှတ် SHA1: 9B:FD:42:C4:65:85:64:35:40:25:35:04:5D:DA:49:29:37:2F:00:D8
ထုတ်လုပ်သူ (CN): Jonathan Meson
အဖွဲ့အစည်း (O): Visual Blasters LLC
နယ်မြေ (L): Miami
FlipaClip: Cartoon animation APK ကိုေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ